Gabar u Dhalatay India oo Muqdisho Afduub Loogu Heystay oo La Badbaadiyay - Latest News Updates
Gabar u Dhalatay India oo Muqdisho Afduub Loogu Heystay oo La Badbaadiyay
Booliska Soomaaliyeed oo soo Badbaadiyay Gabar Hindi ah iyo Saddexdeeda carruur ah oo Afduub loogu heystay Soomaaliya
Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay in ay soo badbaadiyaan Gabar Hindi ah iyo Saddex carruur ah oo ay dhashay oo afduub loogu heystay magaallada Muqdisho.
Maxamed Xuseen Ducaale oo wata Baasaboor Canadian ah ayaa waxa uu Afreen ku guursaday 2013 magaallada Hyderabad, halkaas oo Maxamed uu u shaqeynayay shirkad gaar loo leeyahay.
4 July 2018, ayaa qoyskani waxa ay go’aansadeen in ay Soomaaliya aadaan si Afreen ay u soo barato qoyska ninkeeda.
Bartamihii Febraayo 2019 gabadhan Hindida ah Aabeheed Syed Gafoor Ali oo darawal Mooto Bajaajle ka ah Hyderabad ayaa markii uu helay khabarka gabadhiisa waxa uu la xiriiray laamaha ammaanka Hindiya oo uu ka dalbaday in gabadhiisa loo soo bad baadiyo.
Howl galku aad buu u cuslaa, dowladda Soomaaliyana lama huraan ayay noqotay in lala xiriiro oo ay kiiskaasi soo furdaamiso illaa markii dambe lagu guuleystay.
Yahye Yuusuf Khasaaro